စာအုပ်စင်တီဗီရပ် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM-bestparticleboardfurniture.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan စာအုပ်စင်တီဗီရပ် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - 010-46-1
Angus တီဗီ set ကိုရိုးရှင်းပြီးသပ်သပ်ရပ်ရပ်စတိုင်ဂန္မှောင်မိုက်နှင့်အလင်းအရောင်များကိုပေါင်းဘော်ရောနှော.အဆိုပါဗီဒိုကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်နှင့်အတူသိုလှောင်မှုနေရာများ feature,နေ့စဉ်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုလွယ်ကူပြီးသန့်ရှင်းသပ်ရပ်အာကာသစောင့်ရှောက်စေရာ.အဆိုပါလက်ကိုင်ရိုးရှင်းစင်ကြယ်စှဲများအတွက် chamfered ရှေ့ panel ကိုအတူဝှက်ထားဆွဲထုတ်အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်.အဆိုပါဓာတ်လှေကား-တံခါးကိုဖွင့် MIT ကပျော့ကိုအသုံးပြုသည်-ပိတ်ဟာ့ဒ်ဝဲ,ရှုံ့ချဖြစ်ခြင်းကနေလက်ချောင်းတားဆီးခွငျးအားဖွငျ့စိတျတခုလွယ်ကူခြင်းပေးသော.
အတိုင်းအတာ:W က 295cm x ကို: D 42cm x ကို H ကို 195.5cm
edge တီးဝိုင်း:ရှေ့ပြားများနှင့်တံခါးများအပေါ်ကို ABS အစွန်း banding.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestparticleboardfurniture.com/my/bookshelf-tv-stand.html
စာအုပ်စင်တီဗီရပ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် စာအုပ်စင်တီဗီရပ် ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ OEM ODM-ကျော် 81,900 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ bestparticleboardfurniture.com
Living ROOM တွင်တီဗီသတ်မှတ်မည်